अभिभावकलाई सुझाव : बच्चालाई छुट्टै सुताउने कि आमाबाबुसँगै ? अनुसन्धानले के बताउँछ !
बुधबार, जेठ ४ २०७९ ०२:३३ AM
बुधबार २८ बैशाख २०७९ ११:०४ AM
अनुसन्धान - के साना केटाकेटीहरूलाई आफ्ना आमाबाबुसँग एउटै ओछ्यानमा वा छुट्टै ओछ्यानमा सुत्नु ठीक छ ? अक्सर तपाईं यो प्रश्न मा भ्रमित हुनुपर्छ। आज हामी तपाईको भ्रम हटाउन जाँदैछौं।
साना बच्चाहरूलाई आफैसँग सुत्ने कि छुट्टै ओछ्यानमा सुताउने भन्ने कुरा सबै अभिभावकहरूको दिमागमा प्रायः दुविधा हुन्छ। आज हामी यस सम्बन्धमा तपाइँको दुविधा हटाउन जाँदैछौं। यो समाचार पढेर तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि साना बालबालिकालाई सुताउन कसरी राम्रो हुन्छ।
२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई छुट्टै सुत्नु पर्छ
अमेरिकी पत्रिका ‘साइकोलोजी टुडे’ मा प्रकाशित लेखका अनुसार २ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई अभिभावकको ओछ्यानमा सुत्नु हुँदैन । अन्यथा, तिनीहरूको शरीर ठीकसँग विकास हुँदैन र तिनीहरू अधीनमा रहन्छन्।
कोठामा अतिरिक्त ओछ्यान लिएर सुत्नुहोस्
अनुसन्धानमा भनिएको छ कि बच्चा जन्माएपछि आमाले उनलाई १ वर्षसम्म आफ्नो ओछ्यानमा सुताउनु पर्छ । यसपछि उसले आफ्नो कोठामा एउटा सानो ओछ्यान वा ओछ्यान राखेर अलग्गै सुताउनु पर्छ । बालबालिका ५ वर्ष पुगेपछि छुट्टै कोठामा सुत्नु पर्छ । यो कोठा तपाईंको नजिकै हुनुपर्छ, ताकि बच्चा रातमा डराउनु पर्दैन र शान्तिपूर्वक सुत्न सक्छ।
राती सुत्दा बच्चाको विकास हुन्छ
वास्तवमा साना बालबालिकाको ७० प्रतिशत विकास निद्रामा हुँदा हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसैले बच्चाहरूलाई राती स्वतन्त्र रूपमा सुत्ने मौका दिनुहोस्। यदि तिनीहरू छुट्टै ओछ्यान वा कोठामा सुतिरहेका छन् भने मात्र यो हुन सक्छ।
बालबालिकाको मेरुदण्डको विकासका लागि उनीहरुलाई ओछ्यानमा फैलाएर सुत्नु आवश्यक हुन्छ । यदि उनीहरू आफ्ना आमाबुवासँग एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेका छन् भने, उनीहरू न त आफूले चाहेजस्तो छेउ घुम्न सक्छन्, न त स्वतन्त्र रूपमा सुत्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा साना बालबालिकालाई छुट्टै सुताउन लगाउनु उचित हुन्छ ।
बच्चा आत्मनिर्भर हुन्छ
चिकित्सा विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन छुट्टै सुत्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरु आफ्नो सुत्ने र उठ्ने समयको बारेमा सचेत हुन्छन् । यसका साथै उनीहरुलाई आफ्नो ओछ्यान कसरी सफा राख्ने भन्ने पनि थाहा छ । जसले गर्दा उनीहरुको आत्मविश्वास बढ्छ ।